Baolina kitra - CAN 2019 :: Hifandona amina ekipa tsy mbola nandresy mazava ny Barea • AoRaha
Hiatrika an’i Tonizia ny ekipam-pirenena Malagasy, eo amin’ny taranja baolina kitra, na ny Barea, rahampitso alina, mandritra ny dingan’ny ampahefa-dalana ho an’ ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2019. Hotanterahina ao amin’ny kianjan’ny Al Salam, any Le Caire, amin’ny 10 ora alina (ora eto Madagasikara) ity lalao ity. Ekipa mbola tsy nihaona mihitsy ireo hifanandrina ireo, hatramin’izay nisian’ny taranja tany aminy avy.
Mbola tsy nitranga
Samy hikendry fandre­sena ny roa tonta amin’io dingana io. Sambany no hiatrika ny dingan’ny ampahefa-dalana ny Barea, amin’ ity andiany faha-32 ity, izay tombanan’ny maro ho ekipa bitika nahavita vokatra tsy nampoizina. Efa nahazo ny CAN kosa ny Toniziana tamin’ny taona 2004 ary efa in-12 niatrika ny dingan’ny ampahefa-dalana.
Tamin’ity andiany 2019 ity dia mbola tsy nahita fandresena tao anatin’ny fe-potoana ara-dalàna mihitsy ny “Aigles de Carthage”, avy any Tonizia. Teo amin’ny dingan’ny fifanintsanana dia nisaraka ady sahala tamin’i Mali (1 – 1) sy Maoritania (0 – 0) ary Angola (1 – 1) ry zareo Toni­ziana. Teo amin’ny ampahavalon-dalana dia tamin’ny isa 1 sy 1 no nisarahan’izy ireo tamin’i Ghana, teo amin’ny fe-potoana ara-dalàna ary tany amin’ny “Tirs au But” vao niseho ny fandresen’i Tonizia niakarany ho eo amin’ny ampahefa-dalna.
Tsara ny vokatra azon’ny Barea raha ny lalana vitany hatramin’izao sy oharina amin’iny an’i Tonizia. Fandre­sena telo sy ady sahala iray no vitan’ny ekipam-pirenena malagasy. Laharana faharoa teo amin’ny vondrona E no nisy ny Toniziana ary laharana
fahadimy amby roapolo maneran-tany kosa. Ara-taratasy dia mafy kokoa noho isika izy ireo satria tamin’ny filaharana navoakan’ny Fifa tamin’ny 14 jona farany teo dia nitana ny laharana faha-108 i Madagasikara. Milaza anefa Abel Anicet fa: “hadinoina avokoa ireo lalao rehe­tra vita fa ny lalao ampahefa-dalana no hatrehana” na eo aza izany lalana nandalovan’ny Barea sy Aigles de Carthage izany. Hifanandrina amin’izay tafavoaka amin’i Sénégal sy Bénin eo amin’ ny manasa-dalana izay mandresy amin’i Madagasikara sy Tonizia, amin’ny 14 jolay ho avy izao.
Mikasa handingana ny zava-bitan’i Libia ny Malagas
Mirona ho any amin’ny fanamontsanana ny zava-bitan’i Libia, teo amin’ny CAN ny Barean’i Madagasikara, amin’ity taona ity. Ny Libiana hatramin’izao no ekipa mbola tsy nisedra faharesena hatrany tamin’ireo lalao dimy nifanesy nataony tamin’ny CAN 1982. Lalao efatra kosa no mbola vitan’i Madagasikara, hatramin’izao, ary mbola tsy nandalo faharesena ihany koa. Raha fandresena no azon’ny Barea, manoloana an’i Tonizia dia mitovy ny vokatra ho an’i Madagasikara sy Libia. Miankina amin’ny fandresena eo amin’ny manasa-dalana kosa no hihoarantsika azy ireo. “Mikasa ny handeha lavitra kokoa izahay amin’ity CAN ity”, hoy Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipa nasionaly.
Baolina kitra – CAN 2019 :: Miaina zava-baovao hatrany ny Barean’i Madagasikara
CAN Orange kitra :: Hiditra amin’ny ampahefa-dalana ny lalao